Nnwom 47 NA-TWI - Ɔhene Tumfo - Nnipa nyinaa, mommɔ mo - Bible Gateway
Nnwom 46Nnwom 48
Nnwom 47 Nkwa Asem (NA-TWI)
47 Nnipa nyinaa, mommɔ mo nsam ahosɛpɛw so! Monto nnwom dennen nkamfo Onyankopɔn. 2 Ɛsɛ sɛ wosuro Awurade, ɔsorosoroni no. Ɔyɛ ɔhene kɛse a odi wiase nyinaa so. 3 Ɔma yedii nnipa so nkonim. Ɔma yedii aman so. 4 Oyii asase a yɛte so yi maa yɛn. Ɛyɛ agyapade a ne nkurɔfo a ɔdɔ wɔn de hoahoa wɔn ho.